NITOYO ndeimwe yeinotungamira auto inodzivirira zvikamu ekisipota muChina sine 2000. Isu takanangana nekuisa imwe-mira yekutenga nzvimbo yezvikamu zvemota uye takave nayo NITOYO & UBZ mhando mbiri dzinonakidzwa nemukurumbira wakanaka pasirese.
Tine dzinenge zviuru makumi maviri zvezvigadzirwa zvinofukidza yega auto system senge injini system, brake system, clutch system, kuturika system, magetsi system uye hutachiona system nezvimwe mota dzemota dzinosanganisira mota dzeJapan, Korean, European neAmerican Kwemakore, zvigadzirwa zvedu kutumirwa kunze kwenyika uye kunyanya kunozivikanwa mu Africa, South America, pakati kumabvazuva, uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia musika, unogona kuona yedu Nitoyo kana UBZ brand mumusika wako wemuno
Iye zvino tava kutarisira kushandisa misika yeEuropean neAmerica, nekuti chiono chedu ndechekuti pese paine mota, pane Nitoyo auto zvikamu uye isu tinotora kudzivirira kwako kutyaira sevhosi yedu. Saka mhando inogara iri yedu yekutanga musimboti wesarudzo yechigadzirwa. Zvakare, isu tine imba yedu yekuchengetera saka nguva yekuendesa inosimbiswa.
Kunze kwezvo, sekambani yekutengesa tinoramba tichitsvaga mamodheru matsva uye zvigadzirwa zvitsva kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vedu. Uye isu tinoshanda nesimba kukwidziridzira kufambiswa kwebasa uye nekuvandudza mashandiro ebasa ekuchengetedza yako nguva nesimba. Yezve-yekutengesa sevhisi isu tine nyanzvi yekugadzira kuti ikubatsire iwe kugadzira yako brand logo uye brand brand kurongedza. Nezve kufunga kwekupa vatengi ruzivo rwekutenga zvirinani, isu tinogamuchira dzakasiyana nguva yekubhadhara, zvakare, isu tine yedu yega logistics uye yekufambisa dhipatimendi inoona nezvose zvinotumirwa.
Zvakare, isu tinogara tichigara tichitsvaga tekinoroji yekurapa yepamusoro, tichiteerera kune vatengi vedu 'feeds nekuti isu tine hanya nemutengi' kunzwa. Kufanana neyedu logo inoratidza, isu takazvipira kuvimbisa vatengi vanovimbiswa kutenga uye vatengi vanovimbiswa kushandisa.
Sarudza isu, hatife takakuregedza!
Zvigadzirwa zvedu >>
Mharidzo Kamuri Ratidza